Midowga Afrika oo sheegay in uu wafdi u dirayo jasiiradda Dumeyra oo ay ku muransan yihiin waddamada Jabuuti iyo Eritrea | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Midowga Afrika oo sheegay in uu wafdi u dirayo jasiiradda Dumeyra oo...
Midowga Afrika oo sheegay in uu wafdi u dirayo jasiiradda Dumeyra oo ay ku muransan yihiin waddamada Jabuuti iyo Eritrea
Guddoomiyaha Midowga Afrika, Muusa Faki Maxamed ayaa shalay ku baaqay deganaan isagoo dhinaca kale tilmaamay in wafdi ay u diri doonaan Jaziiradda Dumeyra oo ay ku muransan yihiin labada dal ee dariska ah ee Jabuuti iyo Eritrea.
Eritrea ayaa lagu eedeeyay in ay degdeg ciidamo ugu dirtay deeganka buuraha ee Dumayra kaddib markii Qadar ay kala baxday ciidamadii nabad ilaalinta ee halkaas ka joogay.
Qadar ayaa labada dal dhexdhexaadineysay muranka u dhexeeya Jabuuti Eritrea, waana tan keentay in ay ciidamo geyso Jaziiradda Dumayra kaddib markii uu dhacay heshiiskii xabbad joojinta sannadkii 2010-ka.
Dalka ku yaalla Khaliijka ayaa ciidamadiisa kala baxay kaddib markii labada dal ay la safteen Sacuudiga iyo seddax dal oo kale oo carbeed oo xiriirka u jaray dowladda Qadar.
Qadar ayaa la baxday ciidamo gaaraya 450 askari oo nabad ilaalin ahaa kaddib markii xiirka loo jaray xukuumadda Dooxa. Eritrea waxa ay sheegtay in aysan xog ka heynin go’aanka Qadar sidaas waxaa sheegtay wakaaladda wararka Reuters.
Previous articleBarlamaanka Masar oo kordhiyey muddada xaaladda degdegga ee dalkaas ka jirta
Next articleRa’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo dalka dib ugu soo laabtay